Itoobiya waxay aqoonsan tahay Baasaboorka iyo lacagta Somaliland. Dublamaamisiyiinta Somaliland waxay Itoobiya ku qaabisha xurmada dublamaasi Wasiir ama hogaamiye wadan leeyahay, marka laga reebo calan loo taago.Sida lagu baahiyey warbixin Business Week, oo wakaalada wararka Bloomberg, ee Maraykanku leedahay | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Itoobiya waxay aqoonsan tahay Baasaboorka iyo lacagta Somaliland. Dublamaamisiyiinta Somaliland waxay Itoobiya...
Itoobiya waxay aqoonsan tahay Baasaboorka iyo lacagta Somaliland. Dublamaamisiyiinta Somaliland waxay Itoobiya ku qaabisha xurmada dublamaasi Wasiir ama hogaamiye wadan leeyahay, marka laga reebo calan loo taago.Sida lagu baahiyey warbixin Business Week, oo wakaalada wararka Bloomberg, ee Maraykanku leedahay
Wadahadal lagu horumarinayo ganacsiga u dhexeeya Itoobiya & Somaliland ayaa udub-dhexaad u ahaa markii hogaamiyeyaasha labada waddan ku kulmeen Addis Ababa” ayaa lagu bilaabay warbixin ay warbaahinta Bloomberg baahisay.
Sida lagu baahiyey warbixin Business Week, oo wakaalada wararka Bloomberg, ee Maraykanku leedahay shalay oo faahfaahin laga bixiyey muhiimada kulan dhexmaray labada dal ayaa la raaciyey; “Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal martiqaad uu ka helay Raysal-wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed, Arbacadii ku yimi caasimada Addis Ababa.
Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in labada Hogaamiye ka wada hadleen xaga ganacsiga, Adeegsiga Dekedaha & iskaashiyada dhaqaale iyo amaan ay wadaagaan.
Qodobada kaleayey ka mid ahaayeen dib-u-bilaabida wadaxaajoodkii u dhexeeyey Somaliland & Soomaaliya iyo xaalada Gobolka Geeska Afrika, sida xidhiidhka dhexmaray Itoobiya & Eritrea.
Dalalka Itoobiya & Somaliland ayaa kala saxeexday heshiisyo kala duwan oo Ganacsi, oo labada hogaamiye ka wada xaajoon doonaan.
Balaadhinta dekeda Berbera, boqcad muhiim u ah Somaliland iyo Itoobiya oo shirkada DP World ee Dubai casriyeyn ku samaynayso ayaa qeyb ka ahaa wadaxaajoodka, iyo sidoo kale dhismaha wadadda isku xidha labada dal ee (Berbera Corridor).
Sida lagu sheegay heshiis sannadkii hore dhacay, Itoobiya ayaa ku yeelan doonta saami gaadhay 19% dekeda Berbera, halka shirkada DP World lahaan doonto 51%, inta soo hadhay ee 30% Somaliland.
Xukuumada Itoobiya ayaa sidoo kale maalgelinaysa kaabayaasha wadadda u dhexeysa labada wadan, oo albaab ganacsi u ah dalkan dhinaca Badda ka xidhan, oo ka mid ah dalalka korodhka dhaqaalahoodu ugu sarreeyo caalamka,, waxaana loo balamay xaflada qorshahaa dhamaadka bishan February.
Ganacsi Balaayiin Dollar ah
Itoobiya ayaa ka hesha dhaqaale gaadhay 1 Bilyan Dollar ganacsigooda Somaliland.
Sida ay sheegayaan dadka falanqeeya siyaasada, Itoobiya waa dalka ugu balaadhan ee xidhiidh ganacsi la wadaaga Somaliland.
“Dhowaanshaha Juquraafi & Dhaqan-dhaqaale, waxay ka dhigtay Somaliland, dalka labaad ee ganacsiga ugu badan la wadaaga Itoobiya. Arrimahaa marka lagu darro fursadaha ay ka helayaan, waxay muujinayaan sida ay isugu lamaanaanayaan Somaliland iyo Itoobiya mustaqbalka soo socda” ayuu sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani.
Itoobiya ayaa ku fogaatay aqoonsigooda Somaliland si dabiici ah, balse aan rasmi ahayn. Itoobiya waxay aqoonsan tahay Baasaboorka iyo lacagta Somaliland. Dublamaamisiyiinta Somaliland waxay Itoobiya ku qaabisha xurmada dublamaasi Wasiir ama hogaamiye wadan leeyahay, marka laga reebo calan loo taago.
Wallow aanay beesha caalamku aqoonsan, Somaliland wakhtigan waxay xidhiidh dublamaasi wanaagsan la wadaagtaa jaararkeeda Kenya, Jabuuti, Itoobiya, iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika ugu caansan iyo Qaarada Yuirub, sida Ingiriiska.
Somaliland, oo hore u ahaan jirtay maxmiyadii Ingiriiska ayaa la midowday Soomaaliya oo Talyaanigu maamuli jiray si ay u sameeyaan jamhuuriyadii Soomaaliya 1960-kii, balse dib ula soo noqotay madaxbanaanideedii 1991-dii, ka dib markii rajiimkii Siyaad Barre burburay.
Previous articleMayor Cabdi Shakuur oo Si Adag Uga hadlay dadka Bur Buriya Wadooyinka Xiliyada aay dhacaan xasradaha Buuqa Keena, iyo wadadii batalaale oo si casriya loo Dhisay
Next articleXildhibaan Ka Tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya oo Lagu Dilay Muqdisho